यी युवतीले सारी लगाएर पानीमा लपक्कै भिज्दै गरेका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि…. [भिडियो सहित] - Tufan Media News
यी युवतीले सारी लगाएर पानीमा लपक्कै भिज्दै गरेका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि…. [भिडियो सहित]
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री तनुश्री दत्ताकी बहिनी इशिता दत्ता आफ्नो नयाँ–नयाँ तस्बिरको कारणले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइरहन्छिन् ।हालसालै इशिताको केही तस्बिरहरुले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चाएको छ । उनको पानीमा भिज्दै गरेको तस्बिर भाइरल भएको छ ।बलिउड अभिनेत्री इशिता दत्त अहिलेको समयमा टेलिभिजन शो ‘बेपनाह प्यार’मा मुख्य भूमिका निभाइरहेकी छन् । शोमा उनको भर्खरैको मेकओभरलाई प्रसंशकहरुले खुलेर प्रसंशा गरिरहेका छन् । शोमा उनी प्रया साडी अवतारमा देखिन्छिन् ।